Email kasta oo laga soo diro sanduuqaaga waa fursad suuqgeyn ah. Intii aan u dirnay joornaalkeenna tan tan macaamiisha ah, waxaan sidoo kale u dirnaa 20,000 oo emayl oo kale xiriir maalinle ah oo dhex maraya shaqaalaha, macaamiisha, rajooyinka, iyo xirfadlayaasha xiriirka dadweynaha. Weydiinta qof walba inuu ku daro banner si kor loogu qaado warqad cad ama websaydhka soo socda sida caadiga ah wuxuu ku gudbaa guul yar. Dadka badankood way iska indhatiraan codsiga, kuwa kale waxay qashqashaan iskuxirka, dadka runti riixi kara wicitaanka-ficilku weligood mahelaan.
Haddii aadan rumaysan in saxeexyada iimaylku muhiim yihiin, ka eeg falanqaynta kulaylka isha isha Indhoole.
Tani waa halkaa Sigstr soo galo! Sigstr waxay bixisaa maareynta dhexe ee ololeyaasha saxiixa saxiixa halkaasoo dhammaan isticmaaleyaasha isla markiiba la cusbooneysiin karo. Ololaha waxaa lagu dhisi karaa adoo sawir soo rogaya ama qoraal galaya. Shaqaalahaagu uma baahna inay wax ka beddelaan hal xariiq oo koodh ah - kooxdaada suuq-geynta ayaa is weydaarsan karta ololeyaal markasta oo ay doonaan.
Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha in lagu daro kooxaha ka dibna koox kasta waxaa lagu dari karaa ololeyaal gaar ah! Aad baan ugu farxay Sigstr in aan isla saxeexnay - waana wax cajiib ah in la isticmaalo oo la maareeyo dhammaan shaqaalaheenna.
Tags: Act-Onfalsaxiixyada emailka actonxayiraadololayaal emailsaxiixa emailkasaxeexyada emaylkaraadinta indhahakhariidadahubsashosaxeexyada hubspot emailsuuqosaxeexyada suuqyada suuqacafissaamax saxiixyada emaylkasaxiixyada iimaylka iibkasaxiixasigstr